Làlan'ny fampandrosoana - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Araka ny fenitra ISO9000 sy ISO13485, manangana orinasa manana teboka fanombohana avo sy famaritana avo.
Ao amin'ny orinasa iray ihany any Shina, dia nandalo ny rafitra fitantanana kalitao sy ny fanamarinana CE an'ny TUV any Alemana.
Ity no voalohany any amin'ny faritany no nahazo ny mari-pankasitrahana fitaovana fitsaboana CMD ary nahazo mari-pankasitrahana fisoratana anarana 8 vokatra.
Orinasa tsy miankina mandroso amin'ny faritany Jiangxi.
Ny syringe mamono tena dia azo antoka ary sns dia nahazo alalana tamin'ny marketing amerikana fda510 (k).
Niorina tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Nanchang Xiaolan nasionaly.
Yixin "vokatra andian-dahatsoratra dia ekena ho Jiangxi vokatra marika malaza.
Ny tetik'asa teknikan'ilay orinasa dia voafantina ho ao amin'ny tetikasa National Torch Program.
Nekena ho orinasa nasionaly teknolojia avo lenta izy io, ary ny vokatra vaovao dia voafantina ho vokatra vaovao lehibe ho an'ny firenena.
Ny mari-pamantarana "Yixin" dia ekena ho marika famantarana malaza any Shina.
Famerenana amin'ny laoniny mahomby, ny fananganana ofisialy orinasa iray-stock stock.
Nomena ny andiany voalohany an'ny orinasa vaovao any amin'ny faritanin'i Jiangxi izy io.
Izy io dia fantatra ho andiany voalohany amin'ny orinasa vaovao any amin'ny faritanin'i Jiangxi. Ny sampana antoko mpitsabo sanxin dia novaina ho an'ny sampana ankapobeny.
Nomena azy io ho orinasa lehibe fanondranana any amin'ny faritanin'i Jiangxi.
Ny orinasa dia nanangana toeram-piasana akademia.Shensya Stock Exchange dia voatanisa tamin'ny vatosoa soa aman-tsara.
Nomena azy io ho orinasa fampisehoana mpanamory fiaramanidina marani-tsaina any amin'ny faritanin'i Jiangxi.
Ny lanonana fitokanana an'i Sanxin, Yunnan.
Sichuan Weisheng dia niorina tao amin'ny faritry ny fampandrosoana ara-toekarena Meishan. Tamin'ny taona 2018, nahatratra fiaraha-miasa stratejika niaraka tamin'i Chengdu Weisheng izy io, nahatsapa ny firoboroboan'ny firoboroboan'ny sehatry ny indostria iray manontolo hatramin'ny fanjifana dialy hatramin'ny fitaovana dialyse.
Niaraka tamin'i Ningbo Ferrar izahay, niditra tao amin'ny sehatry ny fandidiana kardothoracic izahay, ary nanao dingana lehibe amin'ny endrika isan-karazany amin'ny sehatry ny fitsaboana sy ny sehatry ny fahasalamana. Ny lanonam-panokafana ny xinpinxi any amin'ny faritanin'i Heilongjiang.
Ny famokarana vokatra andian-tsarimihetsika Sichuan Weisheng dia nanomboka nametraka ny fototra.
Fitsaboana miorim-paka [1997- 2005]
Fitsaboana miorim-paka [2006- 2010]
Fitsaboana miorim-paka [2011- 2015]
Fitsaboana miorim-paka [2016- 2020]